DHISMAHA BAQAARADA SI AY GACMAHOODA U SIIYAAN - DHISMAYAASHA
Ma jiraan meel banaan oo casri ah oo aan la maleyn karin iyada oo aan lahayn duufaan jilicsan, halkaas oo aad cabi karto shaah kokey, la fadhiisto saaxiibo ama ku neefso hawada cusub marka aad ku raaxeysaneyso dabeecadda.
Waxay kuxirantahay sida ay u shaqeyneyso, tayada nasashada waxay ku xiran tahay.
Xagaaga xagaaga waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan loo baahnayn oo ku saabsan dhismaha guri guri. Dabaysha xagaaga waxay noqon kartaa mid furan oo xiran. Isagoo ka hadlaya gebogab xiran, waxaa jira aragtida joogitaanka, sida caadiga ah, oo ah nidaamyo buuxda oo xoqan. Faa'iidooyinka ka mid ah gawaarida la xiray way cad yihiin: hal dhinac waxaad ku raaxaysataa dabiiciga, iyo dhinaca kale, xaaladaha cimiladu maaha kuwo caqabad ku ah.
Muraayada furan waxay u egtahay mid fudud, dabacsan, degan oo si aan fiicnayn u ah bay'ada, halka dabka qaboobaha loo isticmaali karo oo keliya xagaaga. Doorashada qorshaha xagaaga ee xagaaga ayaa si buuxda ugu xiran waxa aad doorbidayso iyo kartidaada.
Kulaylka xagaaga: qalabka wax soo saarka
Gawaarida xayndaabka xagaaga waxaa laga dhigi karaa qalab kala duwan:
lebbiska ama dhagaxa dabiiciga ah;
Dhismayaasha biraha, isticmaalaan qaab dhismeedka hore ee biraha tuubooyinka.
Kuwa ugu caansan waa guryaha xagaaga laga sameeyay alaabta qoriga. Wood waa qalab dhisme ekoloji ah, waxay u egtahay mid soo jiidasho leh, fudud oo sahal ah in la isticmaalo, waa sahlan tahay in la shaqeeyo, waxa uu leeyahay midab dufan ah.
Dhibaatada ka dhalatay noocan oo kale ah waa baahida loo qabo ilaalin joogto ah oo ka timaadda dulinka iyo saameynta waxyeelada leh ee qoyaanka.
Inkasta oo xayndaabyada biraha iyo dhagaxuba ay u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh, waxay qaadanayaan meelo dheeraad ah, laakiin waxay haystaan ​​nolol wakhti dheer oo ay ku shaqeynayaan ayna ka yaraynayaan inay sii wadaan iyo, muhiimna ah, dab-damis.
Qoryaha Wooden ee bixinta
Ka hor inta aanad bilaabin dhisidda dabka, waxaa lagama maarmaan ah in la go'aamiyo goobta qaab dhismeedka dhismaha, iyo sidoo kale inay bixiso suurtogalnimada in lagu xiro shabakadda korantada, waddooyinka beerta, si looga ilaaliyo dhismaha daadadka.
Qaababka dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo leh gacmahooda.
Talooyinka halkan ee loogu talagalay kulanka golaha beeraha ee polycarbonate.
Jerusalem artichoke, siraha beerashada siraha //rusfermer.net/ogorod/korneplodnye-ovoshhi/vyrashhivanie-v-otkrytom-grunte-korneplodnye-ovoshhi/topinambur-i-ego-poleznye-svojstva-dlya-organizma.html.
Ka hor inta aan la bilaabin dhismaha, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo qorshe faahfaahsan qaabka mustaqbalka, si loo sameeyo xisaabin sax ah, taas oo si weyn u fududeyn doonta hawshaada markaad jabinayso dhulalka.
Ma noqon doonto mid aad u macquul ah si loo soo saaro sawirro faahfaahsan oo ku saabsan dhammaan qaybaha dhismayaasha: aasaaska, qaabeynta saqafka iyo walxaha samaynta, qaababka xiran. Sidoo kale samee liis ah qalabka dhismaha ee muhiimka ah iyo qalabka.
Dhismaha xaafad alwaax ah
Ka hor inta aan la dhisin, waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo dhulka, ka saar qashinka, cawska cawska ka dib, ka dib markii qorshaha mustaqbalka ee dhismaha mustaqbalka la fulinayo. Si cad u raacida qorshaha calaamadeynta waxaa lagu dhaqmaa, qoryaha alwaaxda ayaa lagu dhejiyaa geesaha.
Gawaarida alwaaxa waa dhismo si caddaalad leh oo si wanaagsan loo dhisi karo iyada oo aan la aasaasin, si kastaba ha ahaatee si looga fogaado xiriirinta alwaaxda dhulka, taas oo sababi karta dillaac, waxaa lagu talinayaa in kor loo qaado dhismaha oo dhan dhulka korkiisa 20-50 cm. .
Si aad u bilawdo, godadka 0.7-1.0 m qoto dheer ee ku yaala meelaha ku yaala barxadda ee hareeraha iyo hareeraha wareega ayaa la qodayaa, fogaan ah 1.4-1.8 mitir. Qaybaha calaamadaha, biinanka iyo boltska, si toos ah oo saldhig u ah hoyga mustaqbalka ee ku xiran, ayaa lagu rakibay tiirarka lagu rakibay. Heerka ugu sarreeya ee baararka wuxuu la siman yahay heerka biyaha.
Ka dib markii aasaaska loo diyaariyay, qaabka hoose, boostooyinka taageerada iyo lintel, ayaa lagu rakibay. Dhaqanka saqafka ayaa si sahlan loo isugu darsi karaa dhulka oo ku rakib dambiilaha horay loo qabsaday. Grilles iyo saqafka saqafka ayaa si gooni ah loo doortaa, waxaa lagu beddeli karaa dusha.
Talooyin loogu talagalay dhismaha guryaha aqalka ee lagu qubeysto gacmahooda.
Waxaan dhisi doonnaa musqul alwaax alwaax ah //rusfermer.net/postrojki/hozyajstvennye-postrojki/vspomogatelnye-sooruzheniya/stroitelstvo-derevyannogo-tualeta-na-dache-svoimi-rukami.html.
Qodobbada caaga ah ee bixinta
Qodobbada macdanta ah ee la siinayo waa dhismo qurux badan, fudud oo joogto ah. Noocyo kala duwan, laga bilaabo wareegga hoose ee geesoole adag, waxay ku qancin doonaan dhadhanka ugu baahida badan.
Sidoo kale aad u ballaaran ayaa ah noocyada kala duwan ee qaylo-maalmeedyada, laga bilaabo ugu fudud: oo ka soo horjeeda taageerada biraha, qaababka dhismaha oo leh waxyaabo la dhisay oo ku yaal xayndaabka deyrka.
Qoryaha biraha, sida caadiga ah, ayaa laga sameeyaa tuubooyin qaabaysan, oo leh faa'iidooyin dhowr ah:
hawo fiican oo wanaagsan;
dhacdooyinka habka korontada iyo xayawaanka ayaa looga hortagayaa, iyada oo la raacayo in walxaha lagu daaweeyo lakabka lidka-ka-hortagga;
dhismo xoogan oo kalsooni leh;
tuubada qadka ayaa leh miisaan hooseeya, taas oo ka dhigaysa waxyaabaha aasaaska u ah;
Muuqaal jiidasho leh waxaa lagu bixiyaa dusha sare iyo rinjiyeynta walxaha birta leh rinjiga gaarka ah oo ku saleysan additive iyo caag.
Hababka looxa dhejinta biraha:
wax soo saarka iyo kobcinta aqoon isweydaarsiga;
ururinta qaybaha warshadaha ee goobta;
arbacada birta ah.
Polycarbonate Cellular waxaa si weyn loo isticmaalaa qalab loogu talagalay derbiyada iyo saqafyada.
Kobcinta digirta dhirta ee beertooda.
Akhriso sida loo kobciyo xididdo / riwaayada / korneplodnye-ovoshhi/vyrashhivanie-v-otkrytom-grunte-korneplodnye-ovoshhi/kak-vyrashhivat-sveklu-posood-poliv-vnesenie-udobrenij.
Si loo arko gariifka inuu noqdo mid raaxo leh oo raaxo leh, waxaa lagama maarmaan ah in si joogta ah loo fuliyo dhammaan marxaladaha qorshaha dhismaha:
xulashada goobta - soo qaado meel qabow, mugdi ah meel u dhaw hanti dabiici ah ama dabiiciga ah, oo ka fog boodbood
abuuritaanka qaabka, xulashada naqshadaha - arbors waxay noqon kartaa mid joogto ah iyo ku meel gaar ah;
Falanqaynta ciidda, rakibidda aasaasiga ah - boodh iyo dhagax ayaa loo tixgeliyaa carrada ugu fiican, taas oo ku filan in la aasaaso aasaaska ilaa 50 cm. Saldhigga waxaa lagu daboolayaa filimka PVC;
nidaamka ururinta dhismaha waxaa lagu sameeyaa iyadoo ku xiran hadba dhismaha dhismaha;
qurxinta gudaha - haddii loo baahdo oo ku xiran doorashooyinka;